Qgis - AmaGeofumadas
I-Quantum GIS Geographic Information System (GIS)
Ukuxoxisana noCarlos Quintanilla - QGIS
Sikhulume noCarlos Quintanilla, umongameli wamanje weNhlangano yeQGIS, osinikeze umbono wakhe wokwenyuka kwesidingo semisebenzi ehlobene ne-geosciences, kanye nalokho okulindeleke kubo ngokuzayo. Akuyona imfihlo ukuthi abaholi abaningi bezobuchwepheshe emikhakheni eminingi -ukwakhiwa, ubunjiniyela, nabanye-, “i…
Ubunginiyela, Innovations, qgis
I-TwinGEO 5th Edition - Umbono Wezwe
UKUBONAKALISWA KOMHLABA Kule nyanga sethula iTwingeo Magazine kuHlelo lwayo lwesi-5, iqhubeka nendikimba eyinhloko ye- "The Geospatial Perspective" yangaphambilini, nokuthi lokho kuningi kwendwangu okufanele isikwe maqondana nekusasa lobuchwepheshe be-geospatial kanye nokuxhumana phakathi kwalokhu kokunye izimboni ezibalulekile. Siyaqhubeka nokubuza imibuzo eholela ...
I-AulaGEO iyisiphakamiso sokuqeqesha, ngokuya ngobubanzi be-Geo-engineering, enamabhulokhi we-modular ekulandelaneni kweGeospatial, Engineering kanye nokusebenza. Idizayini yendlela yokusebenza isuselwa ku- "Expert Courses", egxile kumakhono; Kusho ukuthi bagxila ekusebenzeni, benze imisebenzi emacaleni asebenzayo, okungcono umongo wephrojekthi eyodwa futhi ...
I-AutoCAD-AutoDesk, Cartografia, cadastre, Izifundo ze-AulaGEO, Ukufundisa CAD / GIS, Geospatial - GIS, -Google Earth / Amamephu, Ubunginiyela, Microstation-Bentley, qgis
Kokuhle ezindabeni ze-QGIS 3.X
Kuyathakazelisa ukuthi izinhlelo zoMthombo Ovulekile zikwazile kanjani ukuzondla ngendlela ezinzile futhi zahlinzeka ngamathuba ebhizinisi kulabo abenezele inani lokufaka isandla; ngenkathi ivumela ukuzinikezela kumnyombo webhizinisi yazi ukuthi izidingo zizokhokhwa ngabanye ochwepheshe ebhizinisini labo. Phakathi kwalezi zinhlobo, i-WordPress ikufanele ukuncoma kwami, ...
Zonke Izindaba ezivela ku-QGIS
Lesi yindatshana yokubuyekeza yazo zonke izindaba ezenzeke eQGIS. Okwamanje kuvuselelwe kunguqulo 2.18. I-QGIS namuhla ingomunye wamathuluzi omthombo ovulekile omkhulu kunawo wonke, onamandla okuncintisana nesoftware yokuphathelene ngendlela esimeme. [nextpage title = "QGIS 2.18 Las Palmas"] Izindaba ...
Izifundo ezihamba phambili ze-QGIS ngesi-Spanish
Ukuthatha isifundo se-QGIS ngokuqinisekile kuyinjongo yabaningi kulo nyaka. Kuzinhlelo zemithombo evulekile, i-QGIS isiphenduke isisombululo ngokufunwa okukhulu, zombili izinkampani ezizimele nezinhlangano zikahulumeni. Ngakho-ke, noma ngabe uyakwazi i-ArcGIS noma elinye ithuluzi, faka kufomu lakho lokusebenzela ...
Ukufundisa CAD / GIS, qgis
3 27 kusukela 2.18 QGIS izinguquko
Lapho sesizoqeda impilo ye-QGIS ngezinguqulo 2.x, silinde okuzoba yi-QGIS 3.0, leli khasi lisikhombisa ukuthi ihlanganisa ini i-QGIS 2.18.11 'Las Palmas', eyenziwe ngokusemthethweni ngoJulayi walo nyaka. I-QGIS njengamanje ine-rebound ehehayo maqondana nabaxhasi abasha, izinkampani ezisemthethweni ezi ...
Python: ulimi okufanele lokubekwa eqhulwini kodaba lokuvulwa Geomatics
Ngonyaka odlule ngikwazile ukufakaza ukuthi umngani wami u- "Filiblu" bekufanele abeke kanjani eceleni uhlelo lwakhe lweVisual Basic for Applications (VBA) abezizwa ekhululekile ngalo, futhi agoqe imikhono yakhe yokufunda iPython kusuka ekuqaleni, ukuthuthukisa i-plugin "HLALA UMASIPALA" kuQGIS. Kuyinto isicelo ebesele ...
Ukufundisa CAD / GIS, Okufakiwe, qgis
I-QGIS, i-PostGIS, i-LADM - ku-Land Administration Course eyenziwe yi-IGAC
Ekuhlanganeni kwezinhlelo ezahlukahlukene, izifiso nezinselelo iColombia ebhekana nazo ukugcina ubuholi esigabeni esiseningizimu ezindabeni zomhlaba, phakathi kukaJulayi 27 no-Agasti 4, i-Centre for Research and Development of Geographic Information - CIAF yeGeographic Institute I-Agustín Codazzi izokwakha i-Course: Ukusetshenziswa kwe-standard ye-ISO 19152 ...
cadastre, Okufakiwe, Geospatial - GIS, qgis
Ukuhambisa ipulatifomu yeGeospatial eminyakeni eyi-10 kamuva - Microstation Geographics - Oracle Spatial
Lokhu kuyinselelo ejwayelekile kumaphrojekthi amaningi eCadastral noma eCartography, okwathi ngonyaka ka-2000-2010 ahlanganisa iMicrostation Geographics njengenjini yedatha yendawo, kubhekwa izizathu ezinjengalezi ezilandelayo: Ukuphathwa kwe-Arch-node kwaba futhi kuyaqhubeka kusebenza kakhulu, kumaphrojekthi we-cadastral . I-DGN iyindlela ehehayo, icubungula ukwenziwa kwayo kufayela elifanayo, ...
cadastre, Okufakiwe, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, qgis
Ngenisa izixhumanisi kusuka ku-Excel kuye ku-QGIS bese udala ama-Polygon
Enye yezindlela ezijwayeleke kakhulu ekusetshenzisweni kwe-Geographic Information Systems ukwakhiwa kwezingqimba zendawo yolwazi oluvela emkhakheni. Noma ngabe lokhu kumela izixhumanisi, ama-vertices wesakhiwo, noma igridi yokuphakama, imininingwane ivame ukuza ngamafayela ahlukaniswe ngokhefana noma amaspredishithi e-Excel
IHhovisi ebulalayo QGIS
Ezinye izindlela zokusebenzisa i-QGIS kuma-mobiles e-Android ne-iOS
I-QGIS izibeke njengethuluzi lomthombo ovulekile elikhulayo kanye necebo lokusimama lokusetshenziswa komhlaba. Siyajabula ukwazi ukuthi sekuvele kunezinguqulo ze-QGIS zamadivayisi eselula. Ukusetshenziswa okubonakalayo kwezicelo zeselula kwenza amathuluzi wedeskithophu akhethe ukuthuthukisa izinhlobo ezizosetshenziswa kumafoni noma kumathebulethi. I…
Okufakiwe, Geospatial - GIS, qgis
I-QGIS 3.0 - Kanjani, nini nokuthi yini; kusho
Abaningi bethu bayazibuza: izokhishwa nini i-QGIS 3.0? Ngonyaka odlule (2015) ithimba lephrojekthi laqala ukuphenya ukuthi i-QGIS 3.0 izokhishwa nini futhi kanjani. Bathembisile, ngokusho kweposi lika-Anita Graser, ukuthi bazodlulisela ngokusobala izinhlelo zabo kubasebenzisi nakubathuthukisi ngaphambi ...
I-Qgis - Amaphasela we-Thematize asuselwa kunkambu yokhiye we-cadastral
Icala: Nginamaphasela kamasipala, anokhiye we-cadastral oyifomu elandelayo: UMnyango, uMasipala, uMkhakha, impahla. okufana nokuthi igama lesibizo laqanjwa njengoba kukhonjisiwe esithombeni: Isibonelo: 0313-0508-00059 Isidingo Isimo ukuthi nginentshisekelo yokukwazi ukuhlela iziza ngokuya ngochungechunge lwesibili, okuyi ...
I-Qgis - Isibonelo semikhuba emihle kumodeli ye-OpenSource
Njalo lapho sihlala phambi kwenkampani noma isikhungo esifuna ukusebenzisa ipulatifomu enendlela yokuphatha indawo, ejwayele ukuzwa amazwi amaningi amabi maqondana namamodeli we-OpenSource, lo mbuzo uqhamuka ngokuhluka okuncane. Ngubani oqinisekisa i-QGIS? Kubonakala ngathi sinesibopho futhi kujwayelekile, ukuthi umuntu owenza izinqumo afune ukuxhasa ...
Ukuqhathanisa nokwehluka phakathi kwe-QGIS ne-ArcGIS
Abangane beGISGeography.com benze i-athikili ebaluleke kakhulu ngokuqhathanisa i-GQIS ne-ArcGIS, ngezihloko ezingekho ngaphansi kwezingu-27. Kuyacaca ukuthi impilo yawo womabili amapulatifomu ayifani, uma kubhekwa ukuthi imvelaphi ye-QGIS ibuyela emuva ku-2002, lapho nje inguqulo yokugcina ezinzile ye-ArcView 3x iphuma ... ebivele ifakiwe ...
Ngenisa idatha kusuka ku-OpenStreetMap kuya ku-QGIS
Inani ledatha ku-OpenStreetMap likhulu impela, futhi yize lingavuselelwa ngokuphelele, ezimweni eziningi linembe kakhulu kunedatha eqoqwe ngokwesiko ngamashidi we-cartographic ngesikali esingu-1: 50,000. Ku-QGIS kuhle ukulayisha lesi sendlalelo njengemephu engemuva njengesithombe se-Google ...
GML ukuvula ifayela QGIS futhi Microstation
Ifayela le-GML lingenye yamafomethi athakazelelwa kakhulu ngabathuthukisi be-GIS nabasebenzisi, ngoba ngaphandle kokuba ifomethi esekelwa futhi eyenziwe yamiswa yi-OGC, isebenza kakhulu ekudlulisweni nasekushintshanisweni kwedatha kuzinhlelo zokusebenza zewebhu. I-GML uhlelo yolimi lweXML ngezinjongo ze-geospatial, isifinyezo salo simele ...